Otu esi eji Glass Weight Scale CW275 nke ọma
site na nchịkwa na 21-06-17
Igwe elele elele elektrọnik CW275 bụ oke nha nke nwere ihe mmetụta 4 nwere mmetụta siri ike, nke nwere ike tụọ ịdị arọ gị nke ọma, mana ị ga-elebara anya iji ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụghị ya, ịdị arọ ga-ele mmadụ anya n'ihu ma metụta nha. Yabụ otu esi eji iko elektrọnik S ...
AOLGA draya ntutu na keettle n'ime ụlọ nke Singapore
site na nchịkwa na 21-06-07
Ozi ọma! Ugbu a igwe nkụcha ntutu na kettle ọhụrụ anyị nọ n'otu ọnụ ụlọ dị nso na CBD nke Singapore.Nice ngwaahịa, hụ ha n'anya! Lee anya na foto ndị mbụ. (AOLGA Hair Dryer RM-DF15 na apparment) (AOLGA Electric Kettle LL-8865 n'ime ụlọ) (foto kichin na Aolga kettle ọhụrụ) & nbs ...
Etu esi eme kọfị site na iji ntụ ntụ kọfị na igwe kọfị AOLGA AC-514K
site na nchịkwa na 21-06-03
1. Mepee aka ahụ-Sere nkata ebe a na-esi nri maka capsules Dolce-Gusto. nke a bụ arụmọrụ nkịtị. 2. Pịa ala ntụ ntụ kọfị ...
Etu esi eji igwe kọfị AOLGA Capsule AC-514K
Kọfị ọhụrụ na -ekpo ọkụ na -eteta ụbụrụ gị wee nye ezumike ngwa ngwa n'otu ụbọchị ọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ kọfị gị, ihe mbụ ị ga-amụta bụ ka esi eji AOLGA Capsule Coffee Machine AC-514K 1 Mepee aka-Wepụ nkata na-eme maka Nespresso capsules, nke ...
Aolga Steam Iron na mmepụta
Igwe ọhụrụ anyị ewepụtara na mmepụta, ndị ọrụ anyị na -arụsi ọrụ ike n'ahịrị mmepụta iji mepụta igwe uzuoku. (ndị ọrụ anyị na -agbakọta igwe na -acha odo odo) Oge a anyị ji ọrụ igwe a na -arụ ọrụ nke ukwuu n'ihi na ụbọchị nnapụta dị n'ime ụbọchị ole na ole.
Ọrụ aka na -eme nke ọma
Taa, ọ ga -amasị m igosi gị gburugburu iji mee ka ị matakwuo gbasara anyị. N'inwe ọfịs na HK, Shenzhen na Shanghai, AOLGA nwere ụlọ ọrụ na ụlọ nkwakọba ihe na mpaghara Guangdong. Nke mbụ anyị chọrọ ịkekọrịta bụ ahịrị mmepụta ntutu. Site na foto a dị n'elu, ị nwere ike ịhụ ntutu isi atọ ...